Sida loogu shukaansado internetka: tilmaamaha ugu fiican iyo khaladaadka guud | Ragga Stylish
Sida loogu shukaansado internetka
Sida aan ogsoonahay, bulshada waxay ubadashay qaabkeeda xiriirkeeda farsamada awgood. Maalmahan, way fududahay in la isku xidho internetka taasina waa waxa moodada ah. Ma aha oo kaliya moodada laakiin waa dhacdo caalami ah oo ku lug leh dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee casriga ah. Si kastaba ha noqotee, dad badani ma oga sida loogu shukaansado internetka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa sida loogu shukaansado internetka iyo maxay yihiin talooyinka ugu fiican.
1 Sida loogu shukaansado khadka tooska ah si aad ula kulanto dadka
2 Daacadnimadu waa fure
3 Sawirro wanaagsan oo lagu barto sida loogu shukaansado khadka tooska ah
4 Ha ku dhicin jacayl dhakhso ah
Sida loogu shukaansado khadka tooska ah si aad ula kulanto dadka
Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa hela lammaanahooda mahadnaqa boggaga internetka si ay u helaan lammaane ama ay ula sheekaystaan ​​si ay ugu shukaansadaan khadka tooska ah. Waa in la cadeeyaa in waxaas oo dhami ay kuxiran yihiin jinsigaaga. Xeerarka ciyaarta ayaa is beddelaya gabi ahaanba iyadoo kuxiran jinsigaaga. Dumarku waqti aad ayey uga sahlan yihiin ragga.
Waxaan eegaynaa maxay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan ee qofku siin karo si uu u barto sida loogu shukaansado internetka. Marka horeba waa sawirka sawirka. Sawirka astaanta leh ee aan dooranayno waa inuu noqdaa sawir ama soo jiidasho aan raadinaynin inuu muujiyo laakiin wuxuu tusi karaa qayb idinka mid ah oo ka kooban soo jiidashadaada. Waa in maskaxda lagu hayaa in cilaaqaadka ka dhexeeya cilaaqaadka internet-ka jirka uu door muhiim ah ka ciyaarayo. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la doorto sawir muuqaalkeenu u muuqdo mid soo jiidasho leh laakiin aan muujin wax badan. Xullo sawirrada aad haysato oo leh qaraar wanaagsan oo wejigaaga si fiican u tusaya oo kuu aqoonsanaya qof ahaan.
Tilmaam kale oo la siin karo dadka raba inay bartaan sida loogu shukaansado internetka ayaa ah inay ka digtoonaadaan khaladaadka naxwaha. Qaabka aad wax uqorto ayaa lagama maarmaan u ah shukaansiga khadka tooska ah. Waxaa jira daraasado badan oo laga sameeyay gudaha Isbaanishka oo muujinaya in naxwaha xun uu noqon karo go'aanka udhaxeeya kulanka iyo diidmada. Waana in saddexdii dumar ahba laba kamid ah aysan xiriir la bilaabin qof khaladaad higaadin ah sameeya. Xagga ragga, 6kiiba 10 ayaa sheegaya inay sidoo kale diidi doonaan xiriir suura gal ah sababtaan.
Daacadnimadu waa fure
Markii aan rabno inaan baranno sida loola macaamilo internetka, waxa ugu horreeya ee aan ka fikirno ayaa ah qurxinta boggayaga. Talada ugu fiican ee la bixin karaa waa in daacad laga ahaado go-go. Kuma tixan kartid sharaxaaddaada oo waxaad raadin kartaa gobollo soo jiita in badan dareenka dadka isticmaala haddii aysan dhab ahayn. Muuji dookhaaga iyo damacaaga, noqo mid toosan oo cad oo, ka sarreeya dhammaan asalka xilligan xaadirka ah muuji qofka aad tahay.
Haddii aad raadineyso shukaansi dalwad ah waa inaad ogaataa inay kuxirantahay haddii aad raadineyso rag ama dumar waxaa jira qaabab gaar ah oo aad u adeegsan karto si aad uga faa'iideysato. Haddii aad raadineyso nin maskaxda ku hay in sawirka uu siinayo muhiimad ka badan in la yiraahdo inta kale. Waa nooc ka mid ah jacaylka aragtida koowaad. Sida aad u xulato sawirkaaga muuqaalka ah ayaa farqiga u dhexeeya in la barto qofka iyo in kale. Haddii aad leedahay dareen wanaagsan oo kaftan ah waad kordhin kartaa dhibcahaaga sidoo kale haddii aad ku kalsoon tahay naftaada.
Haddii aad raadineyso inaad ku guuleysato haweeney waa inaad maskaxda ku haysaa in diiradda ugu weyn ee muhiimaddu tahay sharraxaadda shaqsiyeed. Da'da, dhadhanka iyo xiisaha ayaa ah dhinacyo aasaasi ah oo naftaada loo ogeysiiyo. Marka aad hadalka bilowdo, waxa dumarka aad u soo jiita waa daacadnimo. Waxtar ma leh intaad hadlayso, maxaa yeelay goor dhow ama goor dambe ayaa wax walba la ogaadaa.
Sawirro wanaagsan oo lagu barto sida loogu shukaansado khadka tooska ah
Sawiradaada iyo kuwa aad halkaan kuqaado ayaa muhiim u ah inaad yeelato sawir wanaagsan oo naftaada ah. Hal ama laba sawir sidoo kale waa, laakiin haddii aad ku xad gudubto sawirada in waxa aad halkaan ku sameyso uu qaadi karo qof aan saaxiibo laheyn, nimco la'aan ama narcissistic. Sidoo kale waa inaadan hal sawir iska dhigin, laakiin waxoogaa macluumaad ah oo ku saabsan naftaada ah ka sii sawirradaas. Mid ka mid ah talooyinka la siiyo qof walba waa inuusan uga tagin qaybta sawirka astaanta. Way cadahay in aan sawir la dhigin ay abuureyso carqalad udhaxeysa shukaansiga suuragalka ah iyo adiga.
Beenta iska ilaali oo samir. Samirku waa hubkaaga ugu fiican. Ku muuji waxqabadyadaada sawirro kana fogow dhajinta sawirada isla macnaha si aan loo arkin sida caajisnimada leh. Haddii aad raadineyso xiriir xasilloon, kuma haboona inaad ku bilowdo been. Ha ku sharraxin waxyaabaha aad sameyso waqtiga firaaqada ah haddii aadan xitaa run ahaantii sameyn. Sidoo kale ha dhigin dabeecado aadan laheyn.
Dhanka kale, samir la’aantu waxay ka mid tahay dunuubta ugu ballaaran. Intaad raadinayso inaad ballan la yeelato qofkaas, waa in maanka lagu hayaa in waqtiga lagu gaarayo ay ku xidhan tahay shaqsi kasta. Haddii qofku xoogaa xishood badan yahay, waa inuu taas ku ogaado kahor wadahadal inta uusan si shaqsi ah ula hadlaynin. Hadaad hada bilawday inaad shukaansi la sameyso qof khadka tooska ah, ha weyddiin markaad fariin yar dirto, laakin sheekadu ha socoto. Dulqaad yeelo oo ha quusan, waxa wanaagsan ayaa laga dhigay in la sugo.
Ha ku dhicin jacayl dhakhso ah
Waxaa jira dad bilaaba inay dareemaan dareen deg deg ah oo qofka. Waa inaad sifiican u cadeysaa markaad adeegsaneyso codsi si aad ugu shukaansato internetka waa inaad talaabo talaabo uqaado. Marwalba waad qorshaysan kartaa kulan erotic ah oo soconaya, laakiin haddii waxa aad rabto uu yahay xiriir xasilloon, waxaa fiican inaad horay usocoto waxyar.
Ha ku mashquulin jacayl iyo riwaayad si dhakhso leh. Way fiicantahay inaad marka hore la kulanto qofka oo aad ogaato inay runti iswaafajin karaan. Muuqaal kale ayaa ah ogaanshaha haddii aad diyaar u tahay inaad xiriir dheer la yeelato qofkaas. In lagaa qaadi karo xamaasadda la kulanka qof cusub waana qalad weyn. Waxaa fiican inaad yeelato maskax qabow si ay wax u socdaan kaligood.
Waxay si fiican u doortaan codsi si ay u awoodaan inay ku shukaansadaan. Dhammaan codsiyada isku ujeeddo ma wada aha. Haddii aad rabto la-kulannada aan caadiga ahayn inay galmo sameeyaan adigoon wax ballanqaad ah lahayn markaa hubi in Jaangooyuhu kan ama waxa aad u baahan tahay. Hadda, haddii aad rabto inaad la kulanto kali-kali si aad u bilowdo isdhexgalka dhacdooyinka qaarkood oo aad u hesho fursado badan oo aad ku heli karto xiriir jaceyl oo muddo dheer ah, mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay waa Meetic.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto sida loogu shukaansado internetka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loogu shukaansado internetka
Wavy perm ragga